Gadzirira kugadzirisa kune iOS 9 | IPhone nhau
Tiri pasi pemaawa makumi maviri nemana kubva paApple ichiburitsa iOS 24 yezvose zvishandiso. Iyo nyowani yekushandisa sisitimu inosanganisira yakakosha maficha maficha, uye kunyangwe iwo akakosha akachengeterwa matsva zvigadzirwa (chaiwo multitasking pachiratidziro chePads, 9D kubata, nezvimwewo), iyo yekuvandudza inovimbisa kumutsidzira yako iPhone kana iPad uye kudzoreredza fluidity uye kugadzikana kweimwe nguva. Watsunga kukwidziridzwa kuti ubate rimwezve gore nechishandiso chako? Hapana chinhu chiri nani pane kuve nezvose zvakagadzirirwa kuitira kuti kana nguva yacho yasvika, zvese mubhedha wemaruva uye hapana chikonzero chekuzvidemba kurasikirwa. Tinokupa iwe matipi anonyatso kukubatsira iwe kuona kuti zvese zvinofamba nenzira kwayo.
1 Gadziridza zvaunoshandisa
2 Tarisa data rako rakachengetwa muICloud
3 Ita backup ku iTunes
4 Dhawunirodha mifananidzo yako nemavhidhiyo
5 Zvese zvakagadzirira kugadzirisa
Kana iwe uri mumwe weavo vasina otomatiki maapuro emaapplication akaitwa muApp Store, unogona kunge uine mashoma mashoma maapplication akamirira kugadzirisa. Chinhu chakanakisa ndechekuti usati wagadzirisa iyo system iwe unazvo zvese zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni. Uye munzira iyo haizokuvadze kutora rwendo rweakaisirwa maficha kubvisa iwo ausingashandise, izvo zvirokwazvo kune akanaka mawoko avo. Kuva nezvakawanda zvekuchengetedza zviripo sezvinobvira usati wavandudza inogara iri zano rakanaka.
Tarisa data rako rakachengetwa muICloud
Panguva ino, vashoma chete havashandise iCloud kuchengeta yavo data. Maficha, makarenda, zviyeuchidzo, Safari mabhukumaki, manotsi ... Kuva nazvo zvakachengetwa muApple gore kunokutendera kuti utore pasi zvakare kuchishandiso chako paunongoisa iOS 9 uye simbisa yako iCloud account pairi. Enda kuZvirongwa> iCloud uye tarisa ese ma switch, uine chokwadi chekuti iyo data yaunoda kupora ipapo iri green.
Ita backup ku iTunes
Nekuti chengetedzo yese yakaderera, zvakanakisa kuita backup mu iTunes, kuitira kuti zviitike. Kunyangwe iwe uine maICloud makopi akaomeswa, kuva nekopi pakombuta yako kunogara kuchinyanya kubatsira: unogona kuzvidzorera chero nguva uye kunyange kutora chete imwe data uchishandisa wechitatu-bato kunyorera. Unganidza yako iPhone kana iPad ku iTunes, enda ku Summary tab uye ita backup. Mushure memasekondi mashoma (zvinoenderana nedata rakachengetwa) unozviita.
Dhawunirodha mifananidzo yako nemavhidhiyo
Huwandu hwemapikicha nemavhidhiyo akachengetwa pafoni yako panguva yese iyi zvine chokwadi chekuve zvakakura, uye zvakare zvine chokwadi chekuti hauchayeuke kuti ndirini pawakapedzisira kurodhaunirodha kukomputa yako. Kana iwe uine iCloud raibhurari yakamisikidzwa (zvisingaite kunze kwekunge wawana chinowedzera chinzvimbo) unogona kusvetuka danho iri, asi neimwe nzira chinhu chinopa zano ndechekuti utore mifananidzo yako yese nemavhidhiyo. Zviri nyore kwazvo kune vese vashandisi veWindows neMac, iwe unongofanirwa kubatanidza yako iPhone kana iPad kune komputa uye mirira iyo inoenderana application kuvhura kuunza kunze mafoto, ayo nekutadza anogara achioneka. Kana iwe wakaremara izvi otomatiki kupinza, ipapo uchafanira kumhanya nemawoko.
Zvese zvakagadzirira kugadzirisa
Iwe une zvese zvakagadzirira, iwe unofanirwa kungomirira Apple kuti itange iyo yekuvandudza uye sarudza kana kugadzirisa kana kudzorera, mubvunzo watichakubatsirawo kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Gadzirira kugadzirisa kune iOS 9
Kutanga unboxing yeApple TV 4